Best managed PAMM accounts for forex trading July 2022 - Learn to Trade
Forex Trading 2022 အတွက်အကောင်းဆုံးစီမံထားသည့် Pamm Accounts
နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 27 ဇွန်လ 2022
အကယ်၍ သင်သည် Forex အတွက်စီမံခန့်ခွဲထားသောအကောင့်များကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါက၊ 'PAMM accounts' ဟူသောဝေါဟာရကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ LAMM နှင့် MAM (နောက်ပိုင်းတွင်ပိုမိုအသေးစိတ်) ကိုဖော်ပြရန်မ။
PAMM သည်အတွေ့အကြုံရှိသော Forex ကုန်သည်တစ် ဦး အား ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းအတွက်ခက်ခဲသောအလုပ်များကိုစွန့်ခွာပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုအလွယ်တကူကုန်သွယ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာများသောအားဖြင့်ကြိုတင်သဘောတူညီထားသောကော်မရှင်၏ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်ဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီအကောင့်အမျိုးအစားရဲ့အခြားအားသာချက်တွေထဲကတစ်ခုကတော့နည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆိုင်ရာဗဟုသုတ ရှိ၍ အံသွားခဲစရာမလိုတော့ခြင်းဖြစ်သည်။ အလားတူစွာသင်သည်သမိုင်းဆိုင်ရာစျေးနှုန်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုနားလည်ရန်မလိုအပ်ပါ။
ကုန်သွယ်ရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကိုတတိယပါတီတစ်ခုသို့လွှဲပြောင်းပေးခြင်းသည်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ။ သို့သော်ယခုခေတ်ကုန်သည်များသည်အကျိုးကျေးဇူးများစွာရရှိနေသည် အွန်လိုင်း ထိုကဲ့သို့သောစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်အလိုအလျောက်အကောင့်အဖြစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီး။
အနာဂတ်၊ စတော့ရှယ်ယာများ၊ ကုန်စည်များ၊ ငွေချေးစာချုပ်များနှင့်ရွေးချယ်စရာများကဲ့သို့သောဘဏ္assetsာရေးပိုင်ဆိုင်မှုများကို PAMM အကောင့်ဖြင့်ရောင်းဝယ်ခြင်းသည်ရှားပါးသည်။ သို့သော်ဤနည်းဥပဒေမှခြွင်းချက်ရှိပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည်စီမံခန့်ခွဲထားသောအကောင့်တစ်ခုသို့မဟုတ်အလိုအလျောက်စနစ်ဖြင့် Forex ကိုရောင်းရန်စိတ်ဝင်စားပါက PAMM အကောင့်သည်သင်ရှာဖွေနေသည့်အတိုင်းသာဖြစ်လိမ့်မည်။
၀ င်ရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအသစ်များ (သို့) ဂိမ်းကစားခြင်းမှခဏတာရပ်တည်နေသူများအတွက်ဤလမ်းညွှန်သည် PAMM အကောင့်တစ်ခုနှင့်ပံ့ပိုးသူကိုမရွေးချယ်ခင်မည်သည့်အရာကိုကြည့်ရမည်ကိုရှင်းလင်းသွားလိမ့်မည်။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်အကောင်းဆုံးစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည့် PAMM အကောင့်များကိုတင်ပြပါမည်။
ချက်ချင်းငွေသွင်း / ငွေထုတ်ယူနိုင်သည်
Managed PAMM အကောင့်များသည် အဘယ်နည်း။
PAMM သည် 'ရာခိုင်နှုန်းခွဲဝေမှုစီမံခန့်ခွဲမှုမန်နေဂျာ' ၏အတိုကောက်ဖြစ်သည်။ အတိုချုပ်ပြောရရင်ဒီဟာကသင့်ရဲ့ငွေသားကိုဗဟုသုတရှိတဲ့ကုန်သည်တစ်ယောက်ထဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်အောင်စီမံထားတယ်။ ဤရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်သမိုင်းတွင်ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်းရှိခဲ့ပြီးကုန်သွယ်မှုရလဒ်များကိုအသေးစိတ်စိစစ်နိုင်သည်။
ဤကဲ့သို့သောအကောင့်အမျိုးအစားသည်အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေနှင့်ဆင်တူသည်။ အကြောင်းပြချက်ကတော့၊ သင်ဟာကုန်သွယ်ရန်ကုန်ပစ္စည်းများကိုတတိယပါတီနှင့်အတူရင်းရင်းနှီးနှီးရင်းနှီးမြှပ်နှံထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေကဲ့သို့သင်၏ငွေသည်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်အတူ 'အိုး' တစ်ခုပြုလုပ်ရန်ချိတ်ဆက်ထားသည်။
ဤနည်းဖြင့်အရောင်းအ ၀ ယ်သည်သင့်အားကမ္ဘာ့ဘဏ္marketsာရေးစျေးကွက်၏တံခါးဝသို့ရောက်ရှိရန်ကူညီပေးသည်။ အားလုံးကုန်သွယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်။ မည်သည့်ကျွမ်းကျင်မှုကိုဝယ်ယူခြင်းမရှိဘဲ။ ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်သင်လုပ်နိုင်သည်ထက် ပို၍ ကြီးမားသောအတိုင်းအတာဖြင့်ကုန်သွယ်ရန်သင့်အားခွင့်ပြုသည်။ ဘေးထွက်ပစ္စည်းတစ်ခုအနေဖြင့်သင်၏အလားအလာရှိသောအမြတ်အစွန်းကိုကြီးမားသောအတိုင်းအတာအထိတိုးမြှင့်နိုင်သည်။
ထိုသို့ပြောဆိုခြင်းဖြင့် PAMM နှင့်အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေများသည်အခြားနည်းလမ်းများနှင့်မတူပါ။ PAMM အကောင့်တစ်ခုဖြင့်သင်၏ငွေများကိုအောင်မြင်သောစွမ်းဆောင်မှုသမိုင်းရှိသည့်ကုန်သည်တစ် ဦး ထံအပ်နှံလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ကြီးမားသောဘဏ္institutionာရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည်သင့်ကိုယ်စားဝယ်ယူရန်နှင့်ရောင်းချမည့်အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေများနှင့်ဆန့်ကျင်သည်။
PAMM အကောင့်ကုန်သည်တစ် ဦး သည်များသောအားဖြင့်အာရုံစိုက်သည် တစ်ရက်ကုန်သွယ်, ပိုင်ဆိုင်မှုများဝယ်ယူခြင်းနှင့်တစ်ကြိမ်လအတွင်းသူတို့အပေါ်မှာကိုင်ထားဆန့်ကျင်အဖြစ်။ ဒီသော့ချက်ခြားနားချက်အပြင် PAMM အကောင့်ကုန်သည်တွေဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ငွေတွေကိုအစုစုထဲကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြလိမ့်မယ်။ ၎င်းသည်ဤအကောင့်၏အပြုသဘောဆောင်သောလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပြီးအနိမ့်ဆုံးနည်းဗျူဟာနှင့်ကုန်သွယ်ရန် PAMM ကုန်သည်၏အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားဖြစ်သည်။
အောက်ဖော်ပြပါကဏ္sectionsများတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်စီမံခန့်ခွဲထားသောအကောင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွင်ပါ ၀ င်သောပူးပေါင်းသူသုံး ဦး ၏ရှင်းလင်းချက်ကိုအတူတကွစုစည်းထားပါသည်။
သင်မှန်းဆထားသည်မှာသေချာသည်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည် PAMM အကောင့်ထဲသို့ရန်ပုံငွေများထည့်သွင်းသူဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်ပါကသင်၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာများစွာလုပ်စရာမလိုဘဲဘဏ္gာရေးအကျိုးအမြတ်ကို passively လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤ 'ရေကန်' တွင်သင်နှင့်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ ၁၀၀ ပါဝင်နိုင်သည်။
Forex စျေးကွက်များ၌သင်အတွေ့အကြုံမရှိလျှင်၊ သို့မဟုတ်သင်ဘာလုပ်နေသည်ကိုသိသော်လည်းတစ်နေ့တာတွင်အားလပ်ချိန်များကင်းမဲ့နေပါကဤအကောင့်အမျိုးအစားသည်သင့်အတွက်အထူးသင့်တော်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။
အသိပညာရှိသော Forex PAMM ကုန်သည်
သင်သည် PAMM အကောင့်များကို အသုံးမပြုမီ၊ တတ်ကျွမ်းနားလည်သော ကုန်သည်တစ်ဦးထံ ငွေအချို့ကို အပ်နှံရန် လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းသည် သင်၏ ရန်ပုံငွေမန်နေဂျာ ဖြစ်လာလိမ့်မည်။ သင်သည် အထက်ဖော်ပြပါ ကုန်သည်ကို သင်၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ရန်ပုံငွေများဖြင့် ယုံကြည်လိမ့်မည် ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတို့သည် သင့်ကိုယ်စား Forex စျေးကွက်တွင် အမြတ်အစွန်းများ ရရှိလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
သင်သည်ဤတည်ဆောက်မှုမှအတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များမည်သို့အကျိုးကျေးဇူးရရှိသည်ကိုသင်စဉ်းစားမိနိုင်သည်။ PAMM အကောင့်ပေါ်ရှိကုန်သွယ်မှုတိုင်းအတွက်ကုန်သည်သည်သင်နှင့်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်ကော်မရှင်ရာခိုင်နှုန်းအားကောက်ခံလိမ့်မည်။ ဤနည်းဖြင့်ကုန်သည်သည်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုသည်။ ဤအကောင့်များသည်များသောအားဖြင့်အမြတ်ခွဲဝေမှုစာချုပ်ပါ ၀ င်သည်။ ရလဒ်အနေနှင့်အရင်းအနှီးတက်လာသည်နှင့်အမျှကုန်သည်သည်သီအိုရီအရအမြတ်အစွန်းပိုရသင့်သည်။
အတွေ့အကြုံရှိသော Forex ကုန်သည်သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအားလုံးထံမှရန်ပုံငွေများကိုစုဆောင်းသည့်အခါသူတို့သည်အကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့သွားရသည်။ ပွဲစားကုမ္ပဏီသည်ကုန်သည်များအား PAMM ၀ န်ဆောင်မှုများပေးရန်ကမ်းလှမ်းရမည်။
သင်၏ငွေကိုဂရုစိုက်ရန်တတိယပါတီကိုအားကိုးသည့်အခါ 'ကန့်သတ်ထားသည့်ရှေ့နေချုပ်' သဘောတူညီချက်ကဲ့သို့သောလုံခြုံရေးပိုက်ကွန်အချို့တည်ရှိရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
အတိုချုပ်ပြောရရင်ဒီဟာကကုန်သည်ကိုသင့်ကိုယ်စားရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခွင့်ပေးတဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခု (အထူးသဖြင့်ပွဲစားနေရာတစ်ခု) မှာ။ အကျိုးဆက်အားဖြင့်ဤသည်သည်သင့်အတွက် ၀ ယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ရောင်းသည့်အခါကုန်သည်များကြုံတွေ့ရနိုင်သည့်ဆုံးရှုံးမှုမှန်သမျှအတွက်အပြည့်အဝတာဝန်ယူမှုကိုဆိုလိုသည်။
စီမံခန့်ခွဲထားသော PAMM အကောင့်များ မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် PAMM အကောင့်တစ်ခု၏မူဘောင်ထဲသို့မ ၀ င်မီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်စဉ်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုကြည့်ကြပါစို့။ စီမံခန့်ခွဲထားသော PAMM အကောင့်များသည်အလွန်ကျယ်ပြန့်သောအစုစုနှင့်ဆင်တူသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများစွာသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုပိုင်ဆိုင်သည် - PAMM အကောင့်မန်နေဂျာ (ကုန်သည်) မျှဝေသည်။
သင်၏ Forex PAMM အကောင့်တွင် $20,000 ရင်းနှီးမြုပ်နှံမည်ကို စိတ်ကူးကြည့်ကြပါစို့။
အခုလည်း တခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ ဒေါ်လာ 20,000 ထိုးထည့်တယ်ဆိုပါစို့။
ထို့နောက် PAMM အကောင့်ကုန်သည်သည်သူ၏အိတ်ကပ်မှဒေါ်လာ ၆၀,၀၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည်။
အထက်ပါဥပမာမှသင်မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းဤအထူးသဖြင့် PAMM အစုစုသည်ကုန်သွယ်ရန်ပုံငွေဒေါ်လာ ၁၀၀,၀၀၀ ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ သင်၌ ၂၀%၊ အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမှာ ၂၀% နှင့် PAMM ကုန်သည်သည် ၆၀% ရှိသည်။ ဤဖွဲ့စည်းပုံ၏ရလဒ်အနေဖြင့်သင်သည်ကုန်သည်၏အကောင့်လက်ကျန်ငွေ၏ ၂၀% ကိုအမြဲတမ်းပိုင်ဆိုင်လိမ့်မည်။
အခြားဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့်ကုန်သွယ်မှုပထမတစ်လတွင်သင်၏အကောင့်မန်နေဂျာသည်အမြတ်ငွေ ၄၀% ရှိသည်ဟုယူဆကြပါစို့။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀၀ အကောင့်တွင်အမြတ်သည်ဒေါ်လာ ၄၀၀၀၀ ဖြစ်သည်။
PAMM အကောင့်မန်နေဂျာသည် ၁၅% သောကော်မရှင်ကိုကောက်ခံခဲ့ပြီးဒေါ်လာ ၆၀၀၀ ရရှိခဲ့သည်။ ကျန်ရှိသောဒေါ်လာ ၃၄၀၀၀ ကိုသက်ဆိုင်သူများအကြားမျှဝေမည်ဖြစ်သည်။
ပထမလကုန်တွင် PAMM အကောင့်တန်ဖိုးသည် $134,000 ရှိသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ အကောင့်ရှိ သင်၏ ရှယ်ယာ 20% သည် $26,800 နှင့် ညီမျှသည်။
အခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံသူအတွက်လည်း အလားတူပါပဲ - သူတို့မှာလည်း ရှယ်ယာ 20% ရှိတယ်။
PAMM အကောင့်ကုန်သည်တွင် ရှယ်ယာ 60% ရှိပြီး ယခု $80,400 တန်ဖိုးရှိသည်။
အမှန်ကတော့, ကောင်းမွန်သောအတွေ့အကြုံရှိသောကုန်သည်တစ် ဦး ကိုသင့်အတွက် Forex ၀ ယ်ရန်နှင့်ရောင်းရန်ခွင့်ပြုခြင်းအားဖြင့်၊ သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုဒေါ်လာ ၂၀၀၀၀ မှ ၂၆,၈၀၀ အထိတိုးမြှင့်နိုင်ခဲ့သည်။
PAMM အကောင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို စီမံခန့်ခွဲသည်။
PAMM အကောင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်ပထမ ဦး ဆုံးစဉ်းစားရမည့်အချက်မှာကန့်သတ်ထားသည့်ရှေ့နေချုပ်သဘောတူညီချက်ဖြစ်သည်။ အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်သည်သင်၏ကိုယ်စား Forex ကုန်သွယ်ခွင့်ပြုရန်သင်၏သဘောတူညီမှုကိုအတည်ပြုရန်၎င်းကိုလက်မှတ်ထိုးရန်လိုအပ်သည်။
လတိုင်းရဲ့အဆုံးမှာစီမံခန့်ခွဲထားတဲ့ PAMM အကောင့်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုဘယ်လိုအကဲဖြတ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုဥပမာတစ်ခုကြည့်ရအောင်။
PAMM ကုန်သည်သည် ဇူလိုင်လတစ်လလုံး ငွေကြေးအတွဲများကို ပေးသည်ဆိုကြပါစို့။
ကုန်သည်သည်အမြတ်အစွန်းရသောလတစ်လရှိပြီး ၄၀% အမြတ်ရရှိသည်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။
အစပိုင်းတွင်ဒေါ်လာ ၂၀၀,၀၀၀ တန်ဖိုးရှိ PAMM အကောင့်တစ်ခုတွင်၎င်းသည်ယခုဒေါ်လာ ၂၈၀,၀၀၀ တန်ဖိုးရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။
စာရွက်ပေါ်တွင်၊ ဆိုလိုသည်မှာ သင်၏ပထမဆုံးရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု $20,000 သည် 40% တိုးလာသည်ဟု ဆိုလိုသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကျနော်တို့ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း, PAMM ကုန်သည်သူတို့ရဲ့အမြတ်အစွန်း - ကြိုးစားအားထုတ်မှုများအတွက်ဆုခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်သင်သို့မဟုတ်အခြားပါ ၀ င်ပတ်သက်သူများမည်သည့်အကျိုးအမြတ်ကိုမဆိုမမြင်မှီသူတို့သည်မည်သည့်အမြတ်အစွန်းနှင့် ပတ်သက်၍ မဆိုသူတို့ကော်မရှင်ကိုလက်ခံလိမ့်မည်။
ကုန်သည်သည် အမြတ်ငွေ $40 နှင့်ညီမျှသော ဇူလိုင်လတွင် 80,000% လုပ်ခဲ့သည်။
15% ကော်မရှင်ကိုနုတ်ခြင်းဖြင့်၊ ကုန်သည်သည်အပို $ 12,000 ရလိမ့်မည်။
သက်ဆိုင်သောကော်မရှင်ကိုရယူပြီးနောက် PAMM အကောင့်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအားလုံးကြားတွင်မျှဝေရန် $68,000 ကျန်ရှိနေပါသည်။
ကုန်သွယ်မှုတွင် PAMM ကုန်သည်သည်အမြတ်အစွန်းရသောလတစ်လရရှိလိမ့်မည်ဟုအာမခံချက်မရှိပါ။ ဒီတော့ကုန်သည်မှာရလဒ်မကောင်းဘူးဆိုတာမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။
သြဂုတ်လတွင် ကုန်သွယ်မှုသည် 20% အရှုံးပေါ်ခဲ့သည်။
ဇူလိုင်လမှစတင်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမှ ၎င်းတို့၏အမြတ်ငွေများကို ရုပ်သိမ်းခြင်းမရှိကြောင်း PAMM အစုရှယ်ယာသည် ဒေါ်လာ 20 ၏ 280,000% ဆုံးရှုံးသွားသည်ဟု ယူဆကြပါစို့။
$56,000 ဆုံးရှုံးသွားသဖြင့် အကောင့်လက်ကျန်မှာ $224,000 ရှိပါသည်။
သင်၏အကောင့်တွင်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်အမြတ်အစွန်းရှိသော်လည်း (ကန ဦး ဒေါ်လာ ၂၀၀,၀၀၀ ထက်ပိုမိုမြင့်မားသောကြောင့်) သြဂုတ်လတွင်ကုန်သည်သည်မည်သည့်ကော်မရှင်ကိုမှမကောက်ခံပါ။
မည်သည့်စျေးကွက်တွင်မဆိုကုန်သွယ်မှု၏သဘောသဘာဝအရ PAMM အကောင့်မန်နေဂျာသည်ဆိုးရွားသည့်လကိုတွေ့ကြုံရန်အခွင့်အလမ်းအမြဲရှိသည်။
ထို့အပြင်သင်တစ်လဆုံးရှုံးမှုတစ်လအတွင်းသင်မျက်နှာသာပေးမည့်ထိုအကောင့်မှရန်ပုံငွေများထုတ်ယူခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။ သင်၏အကောင့်တန်ဖိုး၏တန်ဖိုးမှာအတက်အကျရှိနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အကျိုးတူရန်ပုံငွေများကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသောအခါတွင်လည်းအလားတူပင်ဖြစ်သည်။
PAMM အကောင့်များကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း Drawdown ရာခိုင်နှုန်း
ပံ့ပိုးပေးသူကိုရွေးချယ်သည့်အခါ PAMM အကောင့်ဆုတ်ခွာရာခိုင်နှုန်းသည်အရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ ဆုတ်ခွာမှုသည်ကုန်သွယ်သူ၏အကောင့်၏အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည့် PAMM ကုန်သည်များဆုံးရှုံးခဲ့ရသောအမြင့်ဆုံးရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ PAMM အကောင့်သည် ပထမလကုန်တွင် $100,000 တန်ဖိုးရှိသည်ဟု စိတ်ကူးကြည့်ကြပါစို့။
2 လကုန်တွင် အကောင့်သည် $120,000 တန်ပါသည်။
PAMM အကောင့်၏ အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးမှာ $120,000 ဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းသည် ယခုအချိန်အထိ တန်ဖိုးအရှိဆုံးဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ တတိယလသည် အမြင့်ဆုံး $90,000 ဖြင့် ကုန်ဆုံးပါက၊ သင်သည် ဤပမာဏကို $120,000 အထွတ်အထိပ်သို့ တွက်ချက်နိုင်သည်။
ဤပုံဥပမာအကောင့်တွင် အများဆုံးနုတ်ထွက်မှုသည် ယခုအခါ 25% ဖြစ်သည်။
ရိုးရိုးလေးပြောရမယ်ဆိုရင်ဒုတိယလမှာ PAMM အကောင့်ကိုသင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့မယ်ဆိုရင်တတိယလမှာသင်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်ဖိုးဟာ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းနိမ့်ကျလိမ့်မယ်။
အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်တာကတော့ ၁၂ လတာကာလအတွင်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ PAMM အကောင့်များနည်းပါးသော drawdown ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ရှာခြင်းဖြစ်သည်။
ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းသင်ရွေးချယ်ထားသော PAMM ကုန်သည်၏ရောင်း ၀ ယ်မှုအမိန့်ကို Forex ပွဲစားတစ် ဦး လိုအပ်သည်။ အဆိုပါပွဲစားများသည်၎င်းတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ပေးဆောင်ရန်လည်းလိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကုန်သည်သည်ကော်မရှင်နှင့်အခကြေးငွေအမျိုးမျိုးပေးရသည်။
သင်သည် အစုရှယ်ယာဝင်တစ်ဦးဖြစ်သည်ဟူသောအချက်ကြောင့် ဤအပိုကုန်ကျစရိတ်များကို ကုန်သည်၏ကော်မရှင်များတွင် ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ပြောရရင်၊ တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ Forex Trader နဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံပြီး ကုန်သည်ကို သူတို့လိုချင်တဲ့ ဘယ်ပွဲစားကိုမဆို ရွေးချယ်ဖို့ ချန်ထားလိုက်ရုံနဲ့ အဖြူအမည်းလောက်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။
အပြန်အလှန်အားဖြင့်သင် PAMM မန်နေဂျာသည်သင့်အတွက်ပြုလုပ်သောမည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုမဆိုအတည်ပြုရန်သေချာစေရန်လုံခြုံရေးကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်ရမည်။ သင်၏ရန်ပုံငွေများကိုကုန်သည်နှင့်သီးခြားခွဲထားခြင်းလည်းရှိသည်။ တနည်းပြောရရင် PAMM ကုန်သည်သည်သင်၏ငွေများကိုမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အကောင့်ထဲသို့ထည့်သွင်းရန်သင်စိတ်ပူစရာမလိုပါ။
ရရှိနိုင် Managed PAMM Accounts ကို
PAMM အကောင့်များကိုတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ third-party account provider မှဖြစ်စေအသုံးပြုရန်နည်းလမ်းနှစ်မျိုးရှိသည်။ ရွေးချယ်မှုတစ်ခုစီကိုအသေးစိတ်လေ့လာကြပါစို့။
လိုင်စင်ရ forex ပွဲစားများသည် PAMM အကောင့်များကိုကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးသင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာစာရင်းသွင်းခြင်းနှင့်ငွေသွင်းခြင်းအားဖြင့်ကုန်သွယ်မှုအကောင့်အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြစ်သည်။
နောက်တစ်နည်းမှာပွဲစားပလက်ဖောင်း၏ PAMM အကောင့်ဌာနကိုသင်ရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။ ဒီနေရာတွင်ရရှိနိုင် PAMM ကုန်သည်တစ် ဦး ချင်းစီ၏ကျယ်ပြန့်စာရင်းကိုတွေ့လိမ့်မည်။
PAMM ကုန်သည်တစ် ဦး ကိုရှာဖွေသောအခါကော်မရှင်၏မူဘောင်ကိုသင်သဘောတူသည်။ ယခုအချိန်တွင်သင်သည်သင်၏ PAMM အကောင့်ကုန်သည်သို့ငွေအချို့လွှဲပြောင်းရန်လိုအပ်လိမ့်မည်၊ သို့မှသာသူတို့သည်သင့်ကိုယ်စားရောင်းဝယ်နိုင်သည်။
ပွဲစားများနှင့်တိုက်ရိုက်ကုန်သွယ်ခြင်း၏အဓိကအားသာချက်များမှာထိပ်တန်းစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသောကုန်သွယ်ရေးဆိုဒ်များကိုကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ သင်ရွေးချယ်သောမည်သည့် platform တွင်မဆိုလိုင်စင်ရှိရန်အရေးကြီးသည် FCA (Financial Conduct Authority) သို့မဟုတ် သင့်တည်နေရာအတွက် သင့်လျော်သောအဖွဲ့။ အခြား လူသိများသော စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များဖြစ်သည်။ CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) နှင့် ASIC (သြစတြေးလျလုံခြုံရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်) ။
ယခု PAMMs အတွက် third-party account provider များသို့သွားပါ။ ရိုးရိုးလေးပြောရလျှင်ပံ့ပိုးသူသည်သင်နှင့်ပွဲစားကုမ္ပဏီကြားတွင်ကြားခံလူဖြစ်သည်။
နှိုင်းယှဉ်ချက်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တတိယပါတီ PAMM အကောင့်ပံ့ပိုးသူမည်သို့လည်ပတ်နေသည်ကိုအတိုချုပ်ရှင်းပြပါမည်။
Third-party PAMM အကောင့်များသည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နည်းသော်လည်းကုန်သွယ်မှု Forex မှလုံးဝအလိုအလျောက်ရရှိသောဝင်ငွေကိုလိုချင်လျှင်ကြီးသည်။
သင့်အကောင့်ကို third-party မှတစ်ဆင့်ငွေကြေးထောက်ပံ့သောအခါသင်၏ PAMM ကုန်သည်ကိုရွေးချယ်ရန်သင့်အားယေဘုယျအားဖြင့်မည်သည့်ဖုန်းခေါ်ဆိုမည်မဟုတ်ပါ။ ဤဥပမာတွင်သင်သည်ကော်မရှင်ကြေးပေးဆောင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ဤကိစ္စတွင် Third-party platform သည်များသောအားဖြင့်အရာရာကိုဂရုစိုက်သည်။
တတိယပါတီအကောင့်ရွေးချယ်မှုသည်သင့်အားလွတ်လပ်သောကုန်သည်များကိုအသုံးပြုစေနိုင်သည်။ ဤကုန်သည်များသည်သမားရိုးကျ PAMM ကိုမကြာခဏမသုံးတတ်ပါ ပွဲစားများ.
ထပ်ခါတလဲလဲပြောရန်၊ တတိယပါတီဖြစ်စေ၊ မဟုတ်သည်ဖြစ်စေ PAMM ပံ့ပိုးသူသည်လိုင်စင်ရသည့်အကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုအမြဲတမ်းအသုံးပြုပါ။ ပွဲစားကိုမစည်းရုံးနိုင်လျှင်သင်၏ငွေနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအားသင်အမှန်တကယ်အန္တရာယ်ပြုသည်။
စီမံခန့်ခွဲထားသော PAMM အကောင့်များကိုသုတေသနပြုသောအခါ LAMM နှင့် MAM များကိုလည်းသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ၎င်းတို့သည်တူညီသောအသံဖြစ်သော်လည်းသိသာသောကွာခြားချက်များရှိသည်။
ကွဲပြားခြားနားမှုများကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်ရန် Forex စီမံခန့်ခွဲမှုကုန်သွယ်မှုစနစ်တစ်ခုစီ၏ရှင်းလင်းချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့အတူတကွစုစည်းထားပါသည်။ အမြဲတမ်းကဲ့သို့ပင်မည်သည့်အကောင့်ကိုမဆိုမကျူးလွန်မီသုတေသနသည်အဓိကဖြစ်သည်။
သင်သိသည့်အတိုင်း PAMM သည် 'ရာခိုင်နှုန်းခွဲဝေမှုစီမံခန့်ခွဲမှု Module' ကိုဆိုလိုသည်။ အကယ်၍ သင်ရွေးချယ်ပါကရန်ပုံငွေအချို့ကို PAMM သို့သာခွဲဝေချထားနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏အဓိကအကောင့်မှဘဏ္tradာရေးအရောင်းအဝယ်များကိုကူးယူနိုင်သေးသည်။
စီမံထားသော PAMM အကောင့်များသည်ကုန်သည်များသည်အကောင့်တစ်ခုထက် ပို၍ အသုံးပြုခွင့်ပြုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏အရင်းအနှီး၏သီးခြားရာခိုင်နှုန်းကိုကုန်သွယ်ရေးစနစ်သို့ခွဲဝေချထားနိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ဒီအလားအလာသင့်ရဲ့အစုစုကိုကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါတယ်။
PAMM အကောင့်များရှိကုန်သွယ်မှုပုံစံသည်ငွေကြေးမန်နေဂျာများအတွက်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်ဟုယူမှတ်သည်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအချိန်ကိုကြိုတင်ရွေးချယ်နိုင်သည်၊ အချိန်ရွှေ့ဆိုင်းနိုင်သည်နှင့်ကော်မရှင်နှုန်းကိုသဘောတူနိုင်သည်။ သင်၏ PAMM အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုသင်စောင့်ကြည့်နိုင်သည်။
LAMM သည် 'Lot Allocation Management Module' ကိုရည်ညွှန်းပြီး PAMM ၏ရှေ့ပြေးပုံစံဖြစ်သည်။ PAMM များနှင့်မတူသည်မှာ LAMM များသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး ချင်းစီ၏အကောင့်အရွယ်အစားပေါ် မူတည်၍ အလုပ်မလုပ်ပါ။
LAMM ကုန်သည်တစ် ဦး သည်ပုံမှန်ငွေလဲနှုန်းကို ၀ ယ်သည့်အခါတိုင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး ချင်းစီ၏အကောင့်သည်စံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုအနေဖြင့်လည်းတက်သွားသည်။ သငျသညျအမြင့်ဆုံးပျမ်းမျှငွေပမာဏနှင့်အတူကုန်သွယ်လျှင် LAMMs ကြီးမြတ်နိုင်ပါတယ်။
ထို့အပြင် LAMM မန်နေဂျာထက်သင့်တွင်ကုန်သွယ်မှုပမာဏပိုမိုများပြားပါက၎င်းသည်အကျိုးရှိမည်မဟုတ်ပေ။ ဒါဟာအတွေ့အကြုံရှိ LAMM ကုန်သည်နှင့်သင်၌တူညီသောအရွယ်အစားအစုစုရှိသည်ဖြစ်လိမ့်မယ်, အမှု၌, စနစ်ကအများကြီးပိုကောင်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးနှင့်အနည်းဆုံးတော့အခြားစီမံခန့်ခွဲထားသော forex account option သည် 'Multi-Account Manager' ကိုဆိုလိုသည်။ MAM သည်ကုန်သွယ်မှုအကောင့်များစွာကိုပလက်ဖောင်းတစ်ခုတည်းတွင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်စေသည်။
အထူးသဖြင့် MAM အကောင့်သည်အန္တရာယ်များစွာကိုသည်းခံနိုင်သည့်ကုန်သည်များနှင့်အသင့်တော်ဆုံးဟုမှတ်ယူသည်။ အကြောင်းပြချက်မှာ MAM မန်နေဂျာများသည်သတ်မှတ်ထားသောသီးခြားအကောင့်များတွင်ပိုမိုမြင့်မားသောသြဇာကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
သင့်လျော်သော စီမံခန့်ခွဲ PAMM အကောင့်များကို ရွေးချယ်နည်း
ဤအရာသည်အရေးကြီးသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် PAMM မန်နေဂျာသည်သင်၏ကိုယ်စားအရေးကြီးသောဆုံးဖြတ်ချက်များချရန်တာဝန်ရှိသည်။ ထိုအရာဖြင့်လူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုခွင့်ပြုပါ algorithmic ကုန်သွယ် ကုန်သွယ်ရေးအသိုင်းအဝိုင်းကြားတွင်သင်၏ရောင်းဝယ်ရန်အတွက်သင်၏ရန်ပုံငွေကိုအသုံးပြုရန်စနစ်ဖြစ်သည်။
ထိုနည်းတူစွာပင် PAMM ကုန်သည်သည်ဘဏ္marketsာရေးစျေးကွက်တွင်စစ်ဆေးနိုင်သည့်ရလဒ်များအပြင်အတွေ့အကြုံရှိရန်လည်းအရေးကြီးသည်။
ဤရည်မှန်းချက်ကိုရောက်ရှိရန်သင့်အားကူညီရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြီးပြည့်စုံသော PAMM အကောင့်မန်နေဂျာကိုရှာဖွေရန်သင်၏ရှာပုံတော်တွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အရာများစာရင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အတူတကွစုစည်းထားသည်။ သငျသညျ.
PAMM အကောင့်ပလက်ဖောင်းအများစုသည်စတင်ရန်အနည်းဆုံးအပ်ငွေလိုအပ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်သင် PAMM မန်နေဂျာ၏ကုန်သွယ်ရေးအိုးတွင်သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ။
အချို့သော PAMM ပလက်ဖောင်းများသည်အနည်းဆုံးဒေါ်လာနှစ်ရာသို့မဟုတ်သုံးရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမည်ဟုသတ်မှတ်ထားသော်လည်းရံဖန်ရံခါယင်းသည်ထိုထက်များနိုင်သည်။ အနည်းဆုံးအပ်ငွေမည်မျှပင်ရှိပါစေသင်အမှန်တကယ်ဆုံးရှုံးနိုင်သောတတ်နိုင်သလောက်သာသင်သာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသင့်သည်။
စီမံခန့်ခွဲထားသော PAMM အကောင့်များကိုရှာဖွေသောအခါအဓိကသောမက်ထရစ်တစ်ခုမှာအမျိုးမျိုးကွဲပြားသည်။ ကုန်သည်တစ် ဦး ထက် ပို၍ အသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏အစုစုကွဲပြားမှုကိုချက်ချင်းတိုးတက်စေသည်။
သင်ဒေါ်လာ ၂၀၀၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ဆုံးဖြတ်သည်ဆိုပါစို့။ ကိုယ့်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ့်အစား တစ် PAMM ကုန်သည်, သင်ငါးခုရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာကုန်သည်တစ် ဦး သည်တစ်လဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ခဲ့လျှင်သင်၏အစုစုသည်အကျိုးဆက်များကိုမခံစားရပါဟုဆိုလိုသည်။
စီမံထားသည့် PAMM အကောင့်များသည်နေအောက်ရှိပစ္စည်းအားလုံးနှင့်ပတ်သက်သည်။ အဲဒါဟုတ်လား ရှေငွေကြေး၊ အပြာရောင်ချစ်ပ်စတော့ရှယ်ယာများသို့မဟုတ်စွမ်းအင်များ - သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသောအောင်မြင်သောကုန်သည်တစ် ဦး ရှိလိမ့်မည်။
ထိုသို့ပြောကြားခြင်းအားဖြင့်ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုသာမက PAMM ကုန်သည်များလည်းကုန်သွယ်ခြင်းအားဖြင့်သင်၏အစုစုကိုအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲရန်စဉ်းစားသင့်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ သင်၏အရင်းအနှီးများကိုပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းများအကြားဖြန့်ဝေရာတွင်အန္တရာယ်နည်းပါးသည်။
အတွေ့အကြုံရှိသောမည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမဆိုကဲ့သို့ PAMM အကောင့်ကုန်သည်များသည်ငွေရှာရန်ရှာဖွေနေကြသည်။ ငါတို့အစောပိုင်းကပြောခဲ့သလိုပဲ PAMM ကုန်သည်သည်ကော်မရှင်စာချုပ်အားဖြင့်ငွေရှာလိမ့်မည်။ သင်မန်နေဂျာသည်သင်အမြတ်ရရှိသည့်အခါမှသာငွေရှာလိမ့်မည်ကိုစိတ်စွဲမှတ်ထားပါကသူတို့၏စွမ်းရည်ကိုအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းသည်သူတို့၏အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားဖြစ်သည်။
ကော်မရှင်သည် PAMM ကုန်သည်ပေါ်တွင်များစွာမူတည်သော်လည်းတစ် ဦး ချင်း၏ရလဒ်များ၊ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုထင်ဟပ်သင့်သည်။ ရိုးရိုးလေးပြောရမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်တဲ့ကုန်သည်တစ် ဦး အားကော်မရှင်အခကြေးငွေ ၁၈% ပေးရတာကပိုကောင်းတယ်။ ပြီးတော့တကယ်နိမ့်ကျတဲ့နှုန်းကိုပေးရမယ်။
သင့်တော်သော PAMM ပံ့ပိုးသူအားမဆုံးဖြတ်မှီကော်မရှင်၏မူဘောင်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုနားလည်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
တစ်လလျှင် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိအမြတ်များများရနေသည်ဟုဆိုသော PAMM ကုန်သည်တစ် ဦး ကိုကောင်းစွာရှာဖွေခြင်းသည်အလွန်ကောင်းပေသည်။ သို့သော်ဤပြောဆိုချက်ကိုရလဒ်များဖြင့်အတည်မပြုပါကသတိပြုပါ။ တကယ်တော့အဲဒီအထူးပံ့ပိုးသူတွေကိုရှောင်ရှားဖို့အကြံပေးတယ်။
သင်ရှာဖွေသင့်သည့်အချက်အလက်အမျိုးအစားမှာ PAMM ကုန်သည်သည်အဓိကအားဖြင့်မည်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းများ ၀ ယ်၊ ရောင်း၊ အလွန်အရေးကြီးသည်၊ သူတို့၏လစဉ်အကျိုးအမြတ်ကိုဖော်ပြသည်။ သင်၏အိမ်စာလုပ်သည့်အခါချေးယူသည့်ရာခိုင်နှုန်းသည်အစဉ်အမြဲကြည့်သင့်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ထိုဘာသာရပ်အပေါ်ပိုမို။
ထိန်းညှိပွဲစားပလပ်ဖောင်းကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ UK ပွဲစားများသည် တရားဝင်လိုင်စင်ရယူရန် တာဝန်ရှိသည်။ FCA (Financial Conduct Authority)။ အခြားသော အဆင့်တစ် စည်းမျဉ်း အဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်သည်။ ASIC (Australian Securities and Investments Commission) နှင့် CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission)။
သင်၏ငွေများကိုလိုင်စင်ရပွဲစားများအားသာအပ်နှင်းခြင်းအားဖြင့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်နှင့်ငွေများကိုကာကွယ်နိုင်သည်။ ဒါကသာမကပဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအတွက်ရန်ပုံငွေကာကွယ်မှုကိုအာမခံပေးထားတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်၏ရန်ပုံငွေကိုပွဲစားကုမ္ပဏီ၏ရန်ပုံငွေမှခွဲထုတ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ သင်၏အလုပ်ကြိုးစားသောငွေကိုကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်ဖျက်သိမ်းလျှင်၎င်းသည် PAMM အကောင့်မန်နေဂျာ၏အကောင့်ထဲသို့ပြောင်း။ မရပါကအကြွေးအဖြစ်မယူနိုင်ပါ။
ကုန်သွယ်မှုအကောင့်မှမကြာခဏငွေထုတ်ယူသောကုန်သည်များအတွက်စီမံခန့်ခွဲထားသော PAMM များသည်အကျိုးမရှိပါ။ ၎င်းအစား PAMM အကောင့်ကိုရေရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဟာဗျူဟာအဖြစ်ရှုမြင်သင့်သည်။
သင်၏ PAMM ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုရန်ပုံငွေများကိုရယူရန်လိုအပ်သည့်အချိန်သင့်ဘဝ၌အချိန်ရှိနိုင်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ပင် PAMM ပံ့ပိုးသူများ၏ရွေးနှုတ်ခြင်းမူဝါဒသည်တစ်သမတ်တည်းနားလည်ရန်အရေးကြီးသည်။
ဥပမာအားဖြင့်အချို့သည်သင်၏အပ်ငွေမှ ၆ လကြိုတင်ငွေပေးချေရန်လိုအပ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ထိုအချိန်ကာလအတွင်းသင်၏ရန်ပုံငွေများကိုထုတ်ယူနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာရွေးချယ်မှုများနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်ဆိုဒ်တစ်ခုစီသည်ကွဲပြားလိမ့်မည်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုအကောင့်မျိုးနဲ့စတင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ရန်ပုံငွေအချို့ကိုသင်သွင်းဖို့လိုတယ်။ ပလက်ဖောင်းအများစုသည်ပုံမှန်ငွေပေးချေမှုအမျိုးအစားများဖြစ်သော debit / credit cards နှင့် bank transfer များဖြစ်သည်။
အချို့သော PAMM ပံ့ပိုးသူများက e-wallets နှင့် cryptocurrencies ကဲ့သို့သောရွေးချယ်စရာများကိုပေးသည်။ မည်သည့်ပံ့ပိုးသူကိုမဆိုမ ၀ င်မီစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအပြင်အခကြေးငွေဇယားကိုအမြဲတမ်းစစ်ဆေးပါ။
Forex 2022 အတွက်အကောင်းဆုံးစီမံထားသည့် PAMM အကောင့်များ
ဤအချက်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Forex အတွက်စီမံခန့်ခွဲထားသော PAMM အကောင့်များအကြောင်းသင်သိထားသင့်သမျှကိုသင်ဖြတ်သန်းသွားပြီ။ အကျိုးဆက်အားဖြင့်သင်စတင်ရန်စိတ်အားထက်သန်နေပုံရသည်။
ပထမဆုံးသင်လုပ်ရမှာကဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ PAMM အကောင့်ပံ့ပိုးသူကိုရှာဖွေရန်။ ရာနှင့်ချီသော ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအနေဖြင့်ရွေးချယ်ရန်ရွေးချယ်ထားသည့်အတွက်မကောင်းသောအရာမှကောင်းသောအရာများကိုထုတ်ယူရန်ခက်ခဲနိုင်သည်။
forex အတွက် စီမံခန့်ခွဲထားသော PAMM အကောင့်များနှင့် ပတ်သက်လာလျှင် သင့်အား အချိန်နှင့် အားစိုက်ထုတ်မှုများစွာကို သက်သာစေရန်အတွက် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများစာရင်းကို စုစည်းထားပါသည်။
၁။ ကမ္ဘာ့စျေးကွက်များ - တစ်ခုတည်းသောပလက်ဖောင်းတစ်ခုမှတဆင့်အဆုံးမှအဆုံးသို့ Pamm အကောင့်ဝန်ဆောင်မှုများ
ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်များနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်ကမ္ဘာ့စျေးကွက်များကကမ်းလှမ်းရန်များစွာရှိသည်။ ၎င်းတွင် PAMM အကောင့်မှ AI စနစ်များအထိပါဝင်သည်။ ဤပလက်ဖောင်းသည် HYCM (ကောင်းစွာတည်ထောင်ထားသောအကျိုးဆောင်ခြင်း) နှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်သင်စျေးကွက်ရှိထောင်ပေါင်းများစွာသောငွေကြေးဆိုင်ရာကိရိယာများကိုသင်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
ဤရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပလက်ဖောင်းသည်အဆုံးမှအဆုံးသို့ PAMM အကောင့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ World Markets သည်ကွဲပြားသောအကောင့် (၃) ခုပေးသည်။ ပထမရွေးချယ်မှုမှာ 'Trial Account' ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်သင့်အားဆိုက်၏ PAMM ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးချရန်ခွင့်ပြုသည်။ သို့သော်ဤအကောင့်ကိုအသုံးပြုရန်အနည်းဆုံးအပ်ငွေမှာယူရို ၂၅၀၀ ဖြစ်သည်။
'Standard Account' သို့ကူးပြောင်းပါက၎င်းအတွက်အနည်းဆုံးအပ်ငွေမှာယူရို ၅၀၀၀ ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာကော်မရှင်ခွဲဝေမှုသဘောတူညီချက် ၂၀% ပါ ၀ င်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ PAMM ကုန်သည်သည်ပထမလတွင်အမြတ်ငွေယူရို ၁၀၀၀ ရရှိပါကကမ္ဘာ့စျေးကွက်သည်ယူရို ၂၀၀ ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဤဥပမာတွင်ကုန်သွယ်မှုမှအမြတ်ငွေယူရို ၈၀၀ နှင့်သင်ကျန်နေသည်။
အခကြေးငွေကအနည်းငယ်အကုန်အကျများနေပုံရသော်လည်းနောက်ဆုံးရလဒ်အပေါ် မူတည်၍ အမြတ်အစုရှယ်ယာကိုကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်။ ကော်မရှင်ကြေးအပြင်နှစ်စဉ်ပြုပြင်မှု ၁% ကိုလည်းသင်ပေးရလိမ့်မည်။
ဤ PAMM ပံ့ပိုးသူသည်ဖြန့်သည့်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုထပ်တိုး။ မရပါ။ သင်၏လစဉ်ကုန်ဆုံးချိန်တွင်သင်၏ PAMM အကောင့်မှရန်ပုံငွေများကိုသာသင်ရယူနိုင်ကြောင်းသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။ ငွေသွင်းခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်ယူခြင်းအတွက်အကြွေးဝယ်ကဒ်ဖြင့်သင်မပြုလုပ်ပါက၎င်းပလက်ဖောင်းသည်အပိုငွေမယူပါ။
နောက်တတိယနှင့်နောက်ဆုံးအကောင့်ဖြစ်သော Gold Premier Account သို့သွားပါ။ ဤအကောင့်သို့ရောက်သောအခါကမ္ဘာ့စျေးကွက်သည်စွမ်းဆောင်ရည်ကော်မရှင်အတွက် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းသာကောက်ခံသည်။ ထို့အပြင်နှစ်စဉ်ပြုပြင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်မရှိပါ။
ပိုမိုမြင့်မားသောတန်ဖိုးရှိသောအကောင့်ဖြင့်သင်မျှော်လင့်ထားသကဲ့သို့အပိုအကျိုးကျေးဇူးများလည်းရှိပါသည်။ ဥပမာ Gold Premier Account သည်လုံခြုံစိတ်ချရသောအကွက် (အခမဲ့)၊ တနင်္ဂနွေ ၀ န်ဆောင်မှုခံသူများ၏ပံ့ပိုးမှုနှင့်အပိုဆုကြေးအမျိုးမျိုးကိုအပြည့်အဝရယူနိုင်သည်။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်မှာအနည်းဆုံးယူရို ၂၅၀၀၀ ဖြစ်သည်။ သင့်အကောင့်တွင်ဤသို့သောငွေလက်ကျန်မရှိပါကသင်ဤအကောင့်အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီမည်မဟုတ်ပါ။
ရက် ၃၀ အခမဲ့အစမ်းအကောင့် - အနည်းဆုံးအပ်ငွေယူရို ၂,၅၀၀
၁၀% မှ ၂၀% အကြားအမြတ်အစုရှယ်ယာဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ပတ်သက်၍ ကမ္ဘာ့စျေးကွက်များကပွင့်လင်းမြင်သာသည်။
pips သို့မဟုတ်ပြန့်ပွားအပေါ် mark-ups မရှိပါ
ယူရို ၅၀၀၀ နိမ့်ဆုံးစံစာရင်းရှိငွေပမာဏ
CFDs များကိုအရောင်းအဝယ်ပြုသည့်အခါလက်လီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၏အကောင့်များ၏ ၇၆.၄% သည်ငွေဆုံးရှုံးသည်
၂။ FX Pig - သင်နှင့်လွတ်လပ်သော Forex ကုန်သည်များအကြားအလယ်အလတ်
FX Pig သည် online PAMM account service provider ဖြစ်သည်။ ဤပလက်ဖောင်းသည်အလယ်အလတ်ဂျိုးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားအကောင့် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးရုံသာမကခိုင်မာသည့် Forex Pros များနှင့်လည်းပေါင်းစည်းသည်။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူသည်သင်နှင့် PAMM ကုန်သည်များကြားတွင်ကြားခံအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ အသိအမှတ်ပြုခံရဆုံးမိတ်ဖက် ၄ ယောက်မှာ Onda၊ True Move, FXTitan နှင့် Vola တို့ဖြစ်သည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ သင်၏အချိန်အချို့ကို PAMM ကုန်သည်တစ် ဦး ချင်းစီကိုသုတေသနပြုရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ကုန်သည်သည်မည်သည့်သြဇာသက်ရောက်မှု (ရှိခဲ့လျှင်) ကုန်သွယ်သည်ကိုအသုံးပြုသည်၊ ကုန်သည်သည်အဓိကအာရုံစိုက်ထားသောဘဏ္,ာရေးပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ၄ င်းတို့၏အတည်ပြုထားသောကုန်သွယ်မှုရလဒ်များကိုရှာဖွေရန်အရေးကြီးသည်။
ကုန်သည်တစ် ဦး နှင့်သင်ဆုံးဖြတ်ပြီးသည့်အခါသင်ရောက်ရှိသောအခါ FX Pig သည် PAMM အကောင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုဂရုစိုက်ပါလိမ့်မည်။ ပထမ ဦး စွာသင်၏ PAMM အကောင့်ကိုအနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၅၀၀ ဖြင့်ရန်ပုံငွေလိုအပ်သည်။ ဒီပလက်ဖောင်းတွင်ငွေပေးချေနိုင်သောရွေးချယ်စရာများမှာဘဏ်ငွေလွှဲခြင်း၊ ငွေထုတ်ခြင်း၊ ခရက်ဒစ်ကတ်နှင့် Neteller နှင့် Skrill ကဲ့သို့သော e-wallets များဖြစ်သည်။
FXTitan ကဲ့သို့ Forex အကောင့်ကုန်သည်များသည်အနိမ့်ဆုံးဒေါ်လာအနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၂,၀၀၀ ရှိသည်။ ဤကုန်သည်သည်အလွန်ကြီးမားကျယ်ပြန့်သောစွမ်းဆောင်ရည်အခကြေးငွေ ၃၅% ရရှိထားသည်။ အားလုံးပြောကြသည်မှာ FXTitan သည်အထူးကောင်းမွန်သောကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များရှိသည်။ ဤကုန်သည်သည် ၈.၈% ဆုတ်ခွာသည်။
အမျိုးမျိုးသော Forex ကုန်သည်များမှဝင်ရောက်ခွင့်ပေး
ကြိုတင်စစ်ဆေးပြီး PAMM အကောင့်ကုန်သည်များ
ယခု FX ဝက်သို့သွားပါ
၃။ Insta Forex - ပွဲစားနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်သည့် PAMM အကောင့်
Insta Forex သည်အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ငန်းရှင်များဖြစ်သောရွေးစရာများ၊ ငွေ၊ ရွှေ၊ ၁၀၀+ ငွေကြေးအတွဲနှင့် CFD စတော့ရှယ်ယာ ၉၀ နီးပါးကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသောပွဲစားဖြစ်သည်။
ဤအွန်လိုင်းပွဲစားကုမ္ပဏီသည်အထက်ပါဖော်ပြချက်များနှင့်ကွဲပြားသည်။ အကြောင်းပြချက်မှာ Insta Forex သည်လွတ်လပ်သော PAMM အကောင့်မန်နေဂျာမဟုတ်ဘဲအပြည့်အဝပွဲစားကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤဥပမာအားဖြင့်ပွဲစားနှင့်တိုက်ရိုက်စာရင်းသွင်းပြီးသင်၏ငွေများကိုငွေသွင်းရန်လိုအပ်သည်။ သင်လုပ်ပြီးသောအခါရရှိနိုင်သည့် PAMM အကောင့်ကုန်သည်များကိုကြည့်ပြီး 'copy' တစ်ခုကိုရွေးနိုင်သည်။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူသည်သင်၏အရင်းအနှီးကိုအမျိုးမျိုးသောကုန်သည်များသို့ဖြန့်ဝေနိုင်သည်။ သင်သည်သင်၏အစုစုကိုမျိုးစုံချင်လျှင်ဒါဟာအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။
ကော်မရှင်အခကြေးငွေနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်၎င်းသည်သင့်တွင်ရှိသည့်အကောင့်အမျိုးအစားနှင့်ကုန်သည်ရောင်း ၀ ယ်နေသည့်အထူးပိုင်ဆိုင်မှုများပေါ်တွင်များစွာမူတည်လိမ့်မည်။ Insta Forex သည်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည့်ပွဲစားများကဲ့သို့ပင်သင့်လျော်သောအဖွဲ့များကအပြည့်အဝလိုင်စင်ရရှိပြီးဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်၎င်းသည် FSC (BVI) ဖြစ်သည်။ လူကြိုက်များသောငွေပေးချေမှုနည်းစနစ်များကိုဤပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ရရှိနိုင်သည်။ ချေးငွေ၊ ဒက်ဘစ်ကတ်၊
တစ် ဦး ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ပွဲစားနှင့်အတူပထမ ဦး ဆုံးလက်ဆက်သွယ်မှု
FSC နှင့် CySEC မှလိုင်စင်ရသည်
ယခု Insta Forex သို့သွားရောက်ပါ
4. Alpari - ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် PAMM အကောင့်သဘောတူညီချက်များ
အွန်လိုင်းပွဲစားကုမ္ပဏီ Alpari သည် ကုန်သည်များအား စီမံခန့်ခွဲထားသော PAMM အကောင့်များသို့ တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသည်။ Insta Forex ကဲ့သို့ပင်၊ သင်သည် ကုန်သည်များကို သင်ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်နိုင်သည်။ အကောင်းဆုံး ကုန်သည်များကို ရှာဖွေရန် ၎င်းတို့၏ ကုန်သွယ်မှု စိတ်ကြိုက်များနှင့် ခြေရာခံ မှတ်တမ်းကို သုတေသနပြုရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။
ဤပလက်ဖောင်းပေါ်ရှိ PAMM ကုန်သည်များသည်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနီးပါးအတွေ့အကြုံရှိပြီး၎င်းသည်သင့်အားအောင်မြင်မှုအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောခြေလှမ်းကိုလှမ်းစေသည်။ သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသောကုန်သည်တစ် ဦး ကိုသင်တွေ့ရှိပါကကော်မရှင်နှုန်းနှင့်ကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာများကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်။
PAMM အကောင့်မန်နေဂျာတစ် ဦး ချင်းစီသည် ၄ ​​င်းတို့၏အကောင့်များကိုကြိုတင်ငွေဖြည့်ရမည်။ ဤသည်ကသင့်အားစိတ်ငြိမ်သက်မှုပေးသင့်ပြီး၊ အကောင့်ကုန်သည်သည်သင် (နှင့်၎င်းတို့အား) ဖြစ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးအမြတ်အစွန်းဖြစ်စေရန်အတွက်အန္တရာယ်နည်းသောကုန်သွယ်မှုများကိုပြုလုပ်ရန်လှုံ့ဆော်မှုရှိသည်။ Alpari ကို CySEC မှလိုင်စင်ချထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာစင်မြင့်ကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားသည်။
အတွေ့အကြုံရှိ PAMM ကုန်သည်များထံ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။
ကုန်သည်များသည် ၄ ​​င်းတို့၏အစုရှယ်ယာ ၄၀% ဖြင့်သူတို့၏အစုစုကိုရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ပေးသည်
စီမံထားသော PAMM အကောင့်များသည်ကုန်သည်များအားကမ္ဘာ့စျေးကွက်သို့အပြည့်အဝ ၀ င်ရောက်နိုင်သည်။ အကောင်းဆုံးအနေနှင့်သင်ပါဝင်ပတ်သက်မှုအတွက်ကုန်သွယ်ရေးလိုလားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
တစ်ချိန်ကဘင်ဂျမင်ဖရန့်ကလင်က“ အသိပညာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသည်အကောင်းဆုံးအကျိုးကိုပေးသည်” ဟုဆိုခဲ့သည် သို့သော်အချို့သောကုန်သည်များသည်အောင်မြင်မှုရရန်လိုအပ်သည့်အတိုင်းအတာအထိ Forex ၏အတွင်းနှင့်အပြင်ကိုလေ့လာရန်အချိန်မရကြပါ။ အကယ်၍ ၎င်းသည်သင်နှင့်တူပါကသင်၏အတွက်စီမံခန့်ခွဲထားသော PAMM အကောင့်များကိုစဉ်းစားသင့်သည် Forex ကုန်သွယ် ။ ။
အလွန်အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များလည်းရှိပါသည် Forex ဈေးကွက်သို့သော်ဘဏ္simplyာရေးနှင့်စီးပွားရေးသတင်းများကိုမျက်ခြည်မပြတ်ကြည့်ရှုရန်အချိန်မရသူသည်ဇယားများကိုသာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ အချို့သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများလိုလားသောကုန်သွယ်မှုမျိုးကို PAMM မှပံ့ပိုးသူများကခွင့်ပြုထားသည်။
အလားတူပင်၊ သင်သည် အသစ်စက်စက် ကုန်သည်ဖြစ်ပါက၊ စီမံခန့်ခွဲထားသော PAMM အကောင့်များသည် သင့်အား ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အရည်အချင်းအများဆုံးစျေးကွက်တွင် ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ရန် အခွင့်အလမ်းများပေးပါသည်။ ကုန်သွယ်မှု အသိပညာနဲ့ ပတ်သက်လာရင် မင်းရဲ့ အဆင့်က အနည်းနဲ့အများ ဖြစ်နေရင် ကိစ္စမရှိပါဘူး။ သင့်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ရန်ပုံငွေရှိသရွေ့ PAMM ကုန်သည်က သင့်အတွက် အားလုံးကို လုပ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
စီမံခန့်ခွဲထားသော PAMM အကောင့်များ၏မူဘောင်ကိုအစပိုင်းတွင်နားလည်ရန်ခက်ခဲနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်စာချုပ်၌ပါ ၀ င်သည့်သက်ဆိုင်သူ (၃) ဦး - ကုန်သည်၊ အကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ - ရှိသည်။ အားလုံးသည်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်။
ထိုစကားများဖြင့် Forex အတွက် PAMM အကောင့်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးသင်သိထားသင့်သမျှကိုကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြပြီးပြီ။ ရလဒ်အနေနှင့်သင်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမည့် PAMM အကောင့်ပေးသူကိုရှာဖွေရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သင့်သည်။
PAMM သည် 'ရာခိုင်နှုန်းခွဲဝေချထားမှုစီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်း' ၏အတိုကောက်ဖြစ်သည်။ PAMM အကောင့်မန်နေဂျာသည်သင့်အတွက်အရောင်းအ ၀ ယ်ပြုလုပ်ပြီးအားစိုက်ထုတ်မှုအတွက်ရာခိုင်နှုန်းယူသည်။
အနည်းဆုံးအပ်ငွေလိုအပ်သည်မှာပွဲစားပလက်ဖောင်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်၊ အနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၂ ဒေါ်လာဖြင့်စတင်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ PAMM အကောင့်တွင် drawdown ရာခိုင်နှုန်းဘာကိုဆိုလိုပါသလဲ။
ဆုတ်ခွာမှုရာခိုင်နှုန်းသည်ယခင် PAMM အရောင်းအ ၀ ယ်များ၏သမိုင်းဝင်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုသောအတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ PAMM တွင်စံချိန်တင်မြင့်မားသောတန်ဖိုးဒေါ်လာ ၁၅၀,၀၀၀ ရှိပြီးလက်ရှိတွင်ဒေါ်လာ ၁၂၀,၀၀၀ တန်လျှင်၎င်းသည်အများဆုံးအကြွေးနှုတ်ယူမှု ၂၀% ရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်
သင်၏ PAMM အကောင့်ကိုသင်မှတ်ပုံတင်သောအခါအမြတ်ခွဲဝေမှုစာချုပ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကုန်သည်တစ် ဦး အနေဖြင့်သင် PAMM ကို အသုံးပြု၍ သင်ရရှိသောအမြတ်အားလုံး၏ ၁၅% ကိုရရှိသည်။ အကယ်၍ ပထမလကုန်တွင်အမြတ်ငွေဒေါ်လာ ၄၀,၀၀၀ ရရှိပြီးပါကအခြားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုအကျိုးအမြတ်ခွဲဝေခြင်းမပြုမီသင်သည်ကော်မရှင်ဒေါ်လာ ၆၀၀၀ ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
PAMM, LAMM နှင့် MAM အကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ။
သင်၏ PAMM ဖြင့်သင်၏ကုန်သွယ်ရန်ပုံငွေများကိုမည်သည့်နေရာတွင်သိမ်းဆည်းနိုင်သည်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ LAMM ('lot ခွဲဝေမှုစီမံခန့်ခွဲမှု module') သည်သီးခြားကုန်သည်တစ် ဦး ချင်း၏အကောင့်အရွယ်အစားပေါ် မူတည်၍ လည်ပတ်ခြင်းမရှိသောကြောင့် PAMM ၏ရှေ့ပြေးပုံစံဖြစ်သည်။ MAM ('multi-account management') အကောင့်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အခါ၎င်းသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူနှင့် master account များအကြားအရောင်းအ ၀ ယ်များသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်ထူးခြားသည်။ MAM အကောင့်များသည် PAMM နှင့် LAMM တို့ထက်ကုန်သွယ်ရန်ပိုမို passive နည်းလမ်းဖြစ်သည်။